▷ Black Friday on iPad: dhammaan noocyada iibka ah | IPhone news
Qolka Ignatius | 27/11/2021 08:00 | La cusbooneysiiyay 27/11/2021 10:20 | iPad
Haddii inta lagu jiro bisha Sebtembar aadan awoodin inaad dib u cusboonaysiiso iPad-kaagii hore, sababtoo ah waxaad ka baxday miisaaniyad inta lagu jiro fasaxyada. Black Friday waa wakhtiga ugu fiican sanadka si loo cusboonaysiiyo, gaar ahaan hadda oo kala qaybsanaantu ka sii ballaadhan tahay sidii hore.
Sannadkan Jimcaha Madoow waxay bilaabmaysaa Noofambar 26, inkasta oo laga bilaabo Isniinta 22-ka ilaa Isniinta soo socota ee Noofambar 29-keeda, waxaan ka heli doonnaa soo jeedinno nooc kasta ah, ma aha oo kaliya in la cusboonaysiiyo iPad-kaaga, laakiin sidoo kale si loo cusboonaysiiyo iPhone, Mac, Apple Watch, AirPods ...
1 Waa maxay moodooyinka iPad-ka ee lagu iibinayo Jimcaha Madow
2 Maxay u mudan tahay iibsashada iPadka Jimcaha Madow?
3 Intee in le'eg ayay iPad-yadu caadi ahaan hoos u dhacaan Jimcaha Madow?
4 Intee in le'eg ayaa Jimcaha Madoow ee iPads-ka?
5 Halka laga helo heshiisyada iPadka Jimcaha Madoow
Waa maxay moodooyinka iPad-ka ee lagu iibinayo Jimcaha Madow
Bishii May ee isla sanadkan, Apple waxa ay cusboonaysiisay nooca iPad Pro, Apple iPad-ka oo leh astaamo badan oo suuqa ku jira oo uu maamulo isla processor-ka aan ka heli karno MacBookga, M1.
6 bilood ayaa ka soo wareegtay markii la soo bandhigay, dhowr biloodna, waxaan mar hore awoodnay inaan helno dalabyo xiiso leh labadaba 12,9-inch iyo 11-inch model.
Waa hubaal in inta lagu jiro Jimcaha Madow midkoodna labada nooc ee iPad Pro waayi doonaa xisbiga qiimo dhimis.
Iyada oo wax ka badan hal sano iyo badh uu suuqa ku jiro, iPad Pro 2020 weli doorasho aad u fiican isticmaalayaasha aan awoodin, ama aan doonayn inay bixiyaan kharashka jiilka cusub ee sanadkan.
Amazon waxaan wali ka heli karnaa moodooyinka iPad Pro laga bilaabo 2020, gaar ahaan nooca 11-inch qiimo aad u xiiso badan.
In kasta oo 2020-inch iPad Pro 12,9 aanu lahayn joogitaan aad u badan, ganacsatadu waxay hubaal ka faa'iidaysan doonaan Black Friday ka takhalus kaydka la heli karo.
Apple iPad Air 10.9 (4-aad ...
In ka badan hal sano oo suuqa ku jira oo leh nashqad la raacay 11-inch iPad Pro, waxaan haynaa iPad Air, kaniini ah in sanadkan oo dhan la helay. qiimo dhimis, markaa hubaal inaadan seegi doonin Jimcaha Madoow.
2021 Apple iPad (laga bilaabo ...
Jiilka sagaalaad iPad-ka waxa uu suuqa ku jiray in ka badan hal bil, sidaas darteed Ha filan inaad hesho wax dalab ah galitaanka iPadka. Waa inaan sugnaa dhawrka bilood ee soo socda in moodelkan uu xoogaa hoos u dhigo qiimihiisu.
2021 Apple iPad mini (laga ...
iPad mini 2021 waxaad ku heshay update design in isticmaaleyaal badan ay sugayeen korodhka qiimaha ee ka dhashay.
Qaabkan, sida jiilka sagaalaad ee iPad, ayaa suuqa ku jiray in ka badan hal bil, sidaas darteed waad tagi kartaa adiga oo is ilowsan si aad u hesho qiimo dhimis inta lagu jiro Black Friday.
Maxay u mudan tahay iibsashada iPadka Jimcaha Madow?
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in Black Friday waa wakhtiga ugu fiican sanadka ma aha oo kaliya in la sameeyo dukaamaysiga kirismaska, laakiin sidoo kale in la cusboonaysiiyo qalab kasta oo elektaroonik ah oo aan guriga ku hayno.
Shirkadaha oo dhan way helayaan inta badan dakhliga iibka ee rubuci ugu dambeeyay ee sanadkaIyadoo Black Friday uu yahay mid ka mid ah maalmaha ugu muhiimsan, oo ay weheliso Christmas-ka, inkastoo tani ay tahay wakhtiga ugu xun ee la iibsado sababtoo ah korodhka qiimaha ay la kulmaan dhammaan alaabooyinka.
Intee in le'eg ayay iPad-yadu caadi ahaan hoos u dhacaan Jimcaha Madow?
Labada 2021-inch iPad Pro 12,9, iyo nooca 11-inch, waxaan ka heli karnaa dukaamada qaarkood qiimo dhimista ugu badan ee 10%, inkastoo mararka qaarkood ay ku sii jirto kaliya 5%. Iyadoo la tixgalinayo waxa ay ku kacayaan, waa kayd weyn.
Qaabka 2020 iPad Pro, ee labadiisa nooc, haddii aan naqaan sida si wanaagsan loo baadho, waxaan ka heli karnaa ilaa dhowr qiimo dhimis 15-17%, noqoshada xulashooyin xiiso leh oo la tixgeliyo.
Marka laga hadlayo iPad-ka-jiilka sagaalaad iyo iPad-ka-yar, labaduba wax ka badan bil suuqa ku jiraan, Ha filanin inaad hesho qiimo dhimis weyn iyo mid yar. Jiilka 10aad ee iPad waxay u badan tahay in la dhimo inta u dhaxaysa 15-XNUMX%.
iPad Air, ayaa suuqa soo galay 2020, dhowr biloodna, waxaan ka helnay Amazon qiimo dhimis ku saabsan 100 euro nooca gelinta Nasiib wanaag, Jimcaha Madoow waxaad u badan tahay inaad ku hesho qiimo dhimis weyn.
Intee in le'eg ayaa Jimcaha Madoow ee iPads-ka?
Maalinta Black Friday 2021, sida sanad walba, waxaa loo dabaaldegaa maalinta ka dambeysa Thanksgiving oo laga xusay dalka Maraykanka. Maanta oo kale 25 November.
Maalin ka dib, ayaa 26 bisha November, waa marka Black Friday uu si rasmi ah u bilaabmi doono, laga bilaabo 0:01 ilaa 23:59.
Si kastaba ha noqotee, si kuwa ugu jahawareersan aysan u seegin qiimo dhimisyada xiisaha leh ee maalintan, laga bilaabo Isniinta, Noofambar 22 ilaa Isniinta soo socota, Noofambar 29 (Cyber ​​Isniinta), waxaan dooneynaa inaan helno dalabyo nooc kasta ah.
Halka laga helo heshiisyada iPadka Jimcaha Madoow
Apple waxay ahayd ciyaar waalan oo jimco madow ah, markaa ha filanin inaad booqato bakhaaradooda ama shabakadooda internetka si aad u hesho nooc ka mid ah bixinta.
Haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato maalintan oo aad kaydsato lacag mar walba ku habboon inaad ku isticmaasho waxyaabo kale, waa inaad aamintaa Amazon, Maxakamada Ingriiska, mediamarkt, K Tuin, Weyn...
Apple waxay diyaar u tahay dhammaan isticmaalayaasha Amazon, mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah alaabooyinka ay ku qaybiso bakhaarradeeda jireed iyo kuwa khadka tooska ah, laakiin qiimo jaban inta badan.
Maadaama Apple uu ka danbeeyo dhammaan buug-gacmeedka alaabta Apple ee laga heli karo Amazon, waanu ku raaxaysan doonaa dammaanad isku mid ah in aan heli karno haddii aan si toos ah uga iibsanno Apple.
Sanadihii la soo dhaafay, Mediamarkt wuxuu si weyn ugu sharxayaa alaabta Apple, gaar ahaan inta lagu jiro Black Friday, sidaas darteed ma joojin karno eegno dhammaan dalabyada ay daabacaan.
Ama iyada oo loo marayo shabakadeeda ama booqashada mid ka mid ah xarumaha kala duwan ee ay ku leedahay Spain oo dhan, El Corte Inglés ayaa sidoo kale diyaarin doona. qiimo dhimis xiiso leh inta lagu guda jiro Black Friday.
Dukaanka K-Tuin waa ku takhasusay kaliya alaabta Apple, bakhaar ku yaala magaalooyinka aan Apple ku lahayn joogitaanka jirka.
Iyadoo Black Friday ay bixiyaan qiimo dhimis weyn Dhammaan alaabadooda, sidaas darteed marnaba ma dhibayso inaad booqato iyaga inta lagu jiro maalintan.
Magnificos waxa uu noqday K-Tuin ee intarneedka sannadihii u dambeeyay, isaga oo ku takhasusay ugu horrayn alaabta iyo qalabka Apple.
Sannad kasta Black Friday, waxay bixiyaan qiimo dhimis xiiso leh iyo dalabyo xayaysiin in aanan awoodin in aan baxsano.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » ipad jimce madow